Lalao Ravalomanana à Valihazo avec le SYNODAMPARITANY ANTANANARIVO ANTSINANANA PPAA 12 le 25 juillet 2013 – MyDago.com aime Madagascar
3 pensées sur “Lalao Ravalomanana à Valihazo avec le SYNODAMPARITANY ANTANANARIVO ANTSINANANA PPAA 12 le 25 juillet 2013”
26 juillet 2013 à 13 h 07 min
Hafa ihany Neny oah!!!rehefa miaraka @ Tompo dia milamina.
Jereo ireto olona e??misaotra Neny @’ilay TSIKY a!!!
Ilay hetsika koa dia mahaomby rehefa ivelan’Antananarivo no tena marina fa efa VOAVIDIN’
domelina ambongadeny anie TANA e!!!raha tsy izany ve ho ataony @’izay hitiavany azy io….
tapatapahany ny lalana ……. andevidevenana zava-doribory sns tsy voatanisa ,izay rehetra
hanomezana LITIKA ny vahoaka dia mety daholo.
26 juillet 2013 à 13 h 32 min
Fihaonana manaraka eny Tampoketsa !
Précédent Article précédent : Vondron’ny Malagasy manohana ny fehinkevitry ny FFKM : Manameloka ny tsy fanajana ny zon’olombelona
Suivant Article suivant : CT sy CST : rafitra mpanangan-tanana fotsiny , mpandany volam-bahoaka !